I-Paquetá: igadi yezinto ezichaphazelekayo! - I-Airbnb
I-Paquetá: igadi yezinto ezichaphazelekayo!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJosiane
Indlu enkulu ebekwe kwenye yezindlu ezindala ePaquetá, kwisitrato esizolileyo nesithe cwaka, esijikelezwe buhlaza, i-30 mts. ukusuka elwandle kunye ne-15 min. hamba ukusuka kwisikhululo sezikhephe. Igcinwe ngaphakathi kwindlu enkulu yokuhlala kwintsapho ye-4, ecaleni kwendawo ebalulekileyo yembali yesiqithi. Indawo yokungena iqhelekile kuzo zombini izindlu, kodwa yonke indawo yeflethi ibucala. Zonke iindawo ezisingqongileyo zinomoya, zinebalcony ephefumlayo kunye nokuqiniseka ukuba ixesha lakho aliyi kulibaleka.
Izibini, iintsapho ezinabantwana okanye iqela labahlobo abanenkathalo bahlala bamkelekile.
Izibini, iintsapho ezinabantwana okanye iqela lezihlobo zihlala zamkelekile.
Ubumelwane esixekweni esisisiqithi. Isiqithi esikwiBaía da Guanabara eyingingqi. Ndadala njengesixeko. Iguqulwe ngokupheleleyo ibeyiNdawo yoLondolozo lweNdawo yeNkcubeko - i-APAC, ityebile kwiintsomi kunye neziqendu ezibalulekileyo kulwakhiwo lwenkcubeko yaseRio de Janeiro kunye noBukhosi kunye neRiphabhlikhi. Umnini wengqokelela enkulu nebalulekileyo yoyilo kunye nenkangeleko yomhlaba, enezakhiwo ezininzi ezidwelisiweyo nezigciniweyo kunye nendlela yokuphila yoluntu egcinwe luthando lodwa.
Ubumelwane esixekweni esisisiqithi. Isiqithi esiseGuanabra Bay esiyingingqi. Kwakudala njengesixeko saguqulwa ngokupheleleyo saba yiNdawo yoLondolozo lweNdawo yeNkcubeko-i-APAC-ezizityebi kwiintsomi kunye neziqendu ezibalulekileyo kulwakhiwo lwenkcubeko yaseRio de Janeiro kunye noBukhosi kunye neRiphabhlikhi. I-Paquetá inengqokelela enkulu nebalulekileyo yoyilo kunye nembonakalo yomhlaba, enezinto ezininzi ezixabisekileyo nezigciniweyo kunye negqwirha eliphila ubomi boluntu kwindawo ekwanti ekhuselwe ngothando.
Sivulekile kwaye siyavuya ukwenza abahlobo abatsha abafuna ukonwabela ukuzola kwendawo kunye nendalo ye-bucolic yesiqithi.
Sivulelekile kwaye siyavuya ukwenza abahlobo abatsha abafuna ukonwabela ukuzola kwendawo kunye nomoya we-bucolic wesiqithi.
Sivulelekile kwaye siyavuya ukwenza abahlobo a…